Planner: Fampiharana amin'ny fizahana asa, tetik'asa ary tanjona | Avy amin'ny Linux
Planner: fampiharana amin'ny fizahana asa, tetik'asa ary tanjona
Androany dia hijery fampiharana iray hafa isika eo amin'ny sehatry ny famokarana mpampiasa, izany hoe ireo izay mazàna mahitsy, tsotra ary mahitsy amin'ny teboka, na izay mazàna dia manome lanja lehibe amin'ny fanatanterahana ny hetsika isan'andro, hisorohana ny fanelingelenana sy ny fitomboan'ny vokatra.
Ity fampiharana ity dia mitondra izao anarana manaraka izao: «Planner ».
Ho an'ireo izay mbola tsy nahita ny anay Lahatsoratra mifandraika teo aloha miaraka amin'ny fampiharana famokarana antsoina hoe "Super famokarana" o "Superproductivity", avelanay eto ambany ny rohy mba hahafahanay mamaky azy io rehefa avy namaky ity boky ity:
"Super-famokarana dia uLisitry ny lahasa manokana, stamp misy fotoana ary fampiharana mpitantana andraikitra, mety ho an'ny mpandahatra fandaharana sy mpiasa nomerika hafa, izay misy fidirana amin'ny sehatra Jira, Github ary Gitlab ihany koa. Ho fanampin'izay, cross-platform (Linux, MacOS ary Windows) izy io ary ny tanjona kendreny dia ny hampihena ny fotoana lanin'ny mpampiasa amin'ny asa miverimberina ary hanomezana toerana iray hanangonana ny fampahalalana rehetra ilaina amin'ny fanaovana asa na asa manokana. ." Famokarana faran'izay mahery: fampiharana fampiharana lisitra & fizahana fotoana
1 Planner: Task Manager
1.1 Inona no atao hoe Planner?
1.2 Vaovao ankehitriny
1.2.1 Inona ny vaovao
1.2.3 Sarin'ny sary
Planner: Task Manager
Inona no atao hoe Planner?
Araka ny anao tranokala ofisialy, voafaritra manokana toy izao manaraka izao:
" Izy io dia fampiharana an'ny Fitantanana ny asa miaraka amin'ny fanohanana an'i Lisitry ny lahasa ary natao manokana ho an'ny GNU / Linux."
Nandritra ny toetra sy tombontsoa miavaka ity manaraka ity:
Izy io dia fampiharana fampiharana izay manampy amin'ny fanatratrarana ny tanjon'ireo mpampiasa azy, amin'ny alàlan'ny fanamorana ny fanaraha-maso ny asa rehetra, ny tetik'asa ary ny tanjona amin'ny toerana tokana sy tsotra.
Mamela ny asa eo an-toerana, sy amin'ny Internet, amin'ny alàlan'ny fampifanarahana azy amin'ny kaonty ao amin'ny Todoist Platform (https://todoist.com/es).
Manamora ny fandrafetana tetik'asa iray izy io, amin'ny alàlan'ny famelana ireo asa (maro na vitsy) izay ampahany aminy hizara ho fizarana, ary ho tanterahina sy hotantanana amin'ny ampahany.
Izy io dia manana interface tsara sy kanto hita maso izay manohana manampy naoty, mampiseho URL, mamorona fe-potoana ary manampy marika.
Ny rindranasan'ny kalandrie azonao atao dia afaka mirindra miaraka amin'ilay mpandamina ny lahasa mba hitantanana ny hetsikao sy ny todosanao miaraka amin'ny toerana iray.
Manana fanohanana amin'ny fiteny maro izy, ao anatin'izany ny teny Espaniola.
Ny farany kinova ankehitriny, dia ny laharana 2.6.9 navoaka andro vitsy lasa izay. Dika iray izay misy fiovana sy fanovana vaovao marobe, misy ny tondro maso vaovao hahafantarana raha misy tetikasa misy subproject, fanatsarana ny UX handrava na hanitatra subprojects, mpanohitra asa ampiana ao amin'ny Sections sy Tables, miampy fandikan-teny nohavaozina. Raha mila fanazavana fanampiny, azonao atao ny mitsidika raha tranokala ofisialy ao amin'ny GitHub.
Satria misy ny fampiharana hapetraka mivantana avy ao amin'ny online store de Distro Elementary, ary amin'ny hafa amin'ny alàlan'ny ".Flatpak format", nampiasainay ity fomba farany ity, araka ny aseho manaraka rohy, izany hoe amin'ny fampiasana ity baiko manaraka ity:
Aorian'ny fametrahana azy dia azontsika atao ny mampandeha azy amin'ny alàlan'ny fanindriana azy Application Menu kisary na amin'ny alàlan'ity baiko baiko manaraka ity:
Fampahalalana misimisy kokoa momba ny «Planner » azo tanterahina amin'ny manaraka rohy.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Planner», izay fampiharana mahasoa sy mahaliana an'ny Fitantanana ny asa miaraka amin'ny fanohanana an'i Lisitry ny lahasa ary natao manokana ho an'ny GNU / Linux; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Planner: fampiharana amin'ny fizahana asa, tetik'asa ary tanjona
W3C dia nanome satan'ny fenitra WebRTC
Tonga i Firefox 85 nanao veloma an'i Flash ary misy fanatsarana isan-karazany